XORRIYO NIN GAYAA HA GUURSADO - Maqaal! | KULMIYE
XORRIYO NIN GAYAA HA GUURSADO – Maqaal!
Ayadoo candhada giijisoo,godolka fool qaadday
Hashaangeedda-weynow libaax uga gabboon weyney Inaan garaya-cawl ugu tagaa,waa hal soo gudhay.
Akhriste adiga oon meel fogba ka dayin jawaabaha kala gedisan ee maskaxdaadu ka bixinayso su'aalaha kor ku xusan,bal ii yara kaadi aan dib kuu xusuusiyo marxaladihii kala duwanaa ee ay soo martey Gobanimadda aad maanta ay haysato Somalilnd,Waxaa halgankii xoriyadda Somaliland 1981 ilaa 1991 ka qayb qaatey dhamaan burshadda Somaliland mid naftiisa u hura,mud xoolihiisa u hura,mid qalinkiisa u hura,mid murtidiisa u hura,mid dhawaca qaada.
Hadaba miyaaney habooneyn in kii u qalma aynu kursiga ku fadhiisino arintuna noqoto "XORIYO NIN GAYAA HA GUURSADDO"
Cadowga hareeraha ee inoo ciilka qaba waxa banaanka inaga marinaya waa Musharax Muse. Waxa ay Gobannimadu tahay waxaa inoo sheegi doona dareenka dadka iyo abwaanadeena dareenkoodu wuxu yidhi:
"Gobanimada somaliland Waa gundheer tahaye – Gacan siiya waa lagu hirtaa geesi qaaliyahe.